Dagaal Culus Oo Ka Dhacay Degmada Afgooye. – Calamada.com
Dagaal Culus Oo Ka Dhacay Degmada Afgooye.
calamada January 20, 2017 1 min read
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxey dagaal culus ku qaadeen degmada Afgooye oo ka mid ah goobaha shisheeyaha iyo maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka kaga suganyihiin gobalka Shabeelada hoose.
Shabaabul Mujaahidiin ayaa weerar saf ballaaran ah ku qaaday saldhiga’xarunta maamulka degmada iyo guud ahaan fariisimaha iyo isbaarooyinka maleeshiyaatka dowlada federaalka ay ka sameysteen degmadaasi.
Dagaalka oo muddo socday waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan’iyadoona dhawaaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlayay deegaano badan oo ka tirsan gobalka Shabeelada hoose iyo duleedka magaalada Muqdisho.
Wararka hordhaca ah ee dagaalka laga helayo ayaa sheegaya in Shabaabul Mujaahidiin ay la wareegeen gacan ku heynta degmada sida Saldhiga iyo xarunta maamulka degmada’iyadoona maleeshiyaatkii iyo saraakiishii dowlada ee ku sugnaay degmada ay noqdeen kuwoo dhimasho iyo dhaawac ku noqda dagaalka iyo kuwoo cagaha wax ka daya oo gabi ahaan degmada isaga cararay.
Lasoco Waxii Faahfaahin Ah Oo Kusoo Kordha.
Previous: Gaari Taw Ah Oo Shisheeyaha Laga Gubay.
Next: Dhageyso Muxaadaro Qayim Ah Oo Cinwaankeedu Yahay Ø§Ù„ÙˆÙ„Ø§Ø¡ ÙˆØ§Ù„Ø¨Ø±Ø§Ø¡.